ဒီတဈခါလညျး မိုကျကယျအိုဝငျက (၁-၂) ပဲတဲ့…. – Premier League Special
January 29, 2021 yeminn Article 0
ပှဲစဉျ (၂၀)မှာ ဇယားအောကျခွကေ ရှကျဖီးအသငျးကို (၂-၁)နဲ့ မထငျမှတျဘဲ ရှုံးနိမျ့ခဲ့တဲ့ ယူနိုကျတကျ အသငျးဟာ ပှဲစဉျ ( ၂၁ ) အဖွဈ အာဆငျနယျအသငျးကို ဒီည (၁၂း၀၀)နာရီမှာ အမျးမရိတျကှငျးမှာ သှားရောကျယှဉျပွိုငျရမှာဖွဈပါတယျ။
ဒီနှဈသငျးတှဆေုံ့မှုမှာ နောကျဆုံးအခွအေနအေရ ယူနိုကျတကျက ရှကျဖီးယူနိုကျတကျကို မထငျမှတျပဲရှုံးနိမျ့ခဲ့ကာ အဆငျ့(၂)နရောမှာရောကျရှိနပွေီး အာဆငျနယျ အသငျးကတော့ ဆောကျသမျတနျကို အနိုငျရရှိခဲ့ကာ အဆငျ့(၉)နရောမှာ ရပျတညျနပေါတယျ။
ပထမအကြော့တှဆေုံခဲ့စဉျက အာဆငျနယျ အသငျးဟာ ယူနိုကျတကျရဲ့ အိမျကှငျးအိုးထရကျဖိုဒျမှာ (ဝ-၁)နဲ့ အနိုငျရရှိခဲ့ပါတယျ။ ဒီရလဒျဟာ ယူနိုကျတကျအသငျးအတှကျကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှဈ စကျတငျဘာလနောကျပိုငျး အာဆငျနယျကို ပရီးမီးယားလိဂျအိမျကှငျးပှဲစဉျမှာ ပထမဆုံးအကွိမျ ရှုံးနိမျ့မှုဖွဈခဲ့ပါတယျ။
ဖာဂူဆနျနဲ့ အာဆငျဝငျးဂါးတို့ နညျးပွခဲ့ခြိနျမှာ ဒီနှဈသငျးတှဆေုံတိုငျး တဈကမ်ဘာလုံးက ဘောလုံးပရိသတျတှေ စိတျဝငျတစားရှိခဲ့ကွတဲ့ပှဲဟာ သူတို့နှဈဦး အသငျးတှကေနေ နှုတျထှကျခဲ့ခြိနျမှာတော့ ပွိုငျဆိုငျမှုဟာ အသကျမဲ့ခဲ့သလိုဖွဈခဲ့ပါတယျ။
အခုအခြိနျမှာတော့ ဆိုလျးရှားရဲ့ ယူနိုကျတကျဟာ ဇယားထိပျပိုငျးမှာရပျတညျလာနိုငျတဲ့အထိ စှမျးဆောငျရညျတှရှေိလာခဲ့သလို အာတီတာရဲ့ အာဆငျနယျအသငျးဟာလညျး နိုငျပှဲတှရေရှိလာနပေါတယျ။ ဒီတဈကွိမျမှာတှဆေုံ့မှာက အာဆငျနယျအသငျးအတှကျက သူတို့ရဲ့အိမျကှငျး (အမျးမရဈ)၊ ပွိုငျဘကျက ဒီရာသီမှာ အဝေးကှငျးစှမျးဆောငျရညျအားသာတဲ့ ယူနိုကျတကျ၊ ဒီပှဲရလဒျကဘယျလိုဖွဈလာမလဲ…?
ယူနိုကျတကျ – ရှကျဖီး ပှဲမှာ ခနျ့မှနျးမှုပွောငျးပွနျဖွဈခဲ့တဲ့ မိုကျကယျအိုဝငျကတော့ ယခုပှဲစဉျမှာလညျး ယူနိုကျတကျက ( ၂ -၁ ) ရလာဒျနဲ့ အာဆငျနယျအသငျးကို အနိုငျရရှိမယျလို့ ခနျ့မှနျးထားပါတယျ။ အိုဝငျက BetVictor မှာ “အာဆငျနယျအသငျးက ရာသီအစမှာ ရလာဒျဆိုးရှားခဲ့ပမေယျ့ နှဈသဈမကူးခငျ ပုံစံကောငျး ပွနျလညျရရှိလာပါတယျ။ ယူနိုကျတကျကလညျး ပွီးခဲ့တဲ့ ရှကျဖီးနဲ့ ပှဲစဉျမတိုငျခငျထိ အမှားအယှငျးမရှိကစားနိုငျခဲ့တဲ့အသငျးတဈသငျးဖွဈပွီး ဒီရာသီမှာ ယူနိုကျတကျရဲ့ အဝေးကှငျး ခွစှေမျးက ပိုပွီး ကောငျးမှနျပါတယျ။”
“လီဗာပူးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲစဉျတှကေ နညျးစနဈကို ပွနျလညျ အသုံးခမြယျဆိုရငျ ယခုပှဲစဉျမှာလညျး ရလာဒျကောငျးတဈခု ပိုငျဆိုငျနိုငျပါတယျ။”
“မားကတျရကျဖို့ဒျအနနေဲ့ လီဗာပူးအသငျးကို အနိုငျရရှိခဲ့တဲ့ အကျဖျအဖေလားပှဲစဉျက ခွစှေမျးကို ဆကျထိနျးထားနိုငျမယျဆိုရငျ ဒီပှဲစဉျမှာလညျး သှငျးဂိုးရယူနိုငျလိမျ့မယျလို့ထငျပါတယျ ။” ဟု ပွောကွားသှားခဲ့ပါတယျ။
ဒီတစ်ခါလည်း မိုက်ကယ်အိုဝင်က (၁-၂) ပဲတဲ့….
ပွဲစဉ် (၂၀)မှာ ဇယားအောက်ခြေက ရှက်ဖီးအသင်းကို (၂-၁)နဲ့ မထင်မှတ်ဘဲ ရှုံးနိမ့်ခဲ့တဲ့ ယူနိုက်တက် အသင်းဟာ ပွဲစဉ် ( ၂၁ ) အဖြစ် အာဆင်နယ်အသင်းကို ဒီည (၁၂း၀၀)နာရီမှာ အမ်းမရိတ်ကွင်းမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။
ဒီနှစ်သင်းတွေ့ဆုံမှုမှာ နောက်ဆုံးအခြေအနေအရ ယူနိုက်တက်က ရှက်ဖီးယူနိုက်တက်ကို မထင်မှတ်ပဲရှုံးနိမ့်ခဲ့ကာ အဆင့်(၂)နေရာမှာရောက်ရှိနေပြီး အာဆင်နယ် အသင်းကတော့ ဆောက်သမ်တန်ကို အနိုင်ရရှိခဲ့ကာ အဆင့်(၉)နေရာမှာ ရပ်တည်နေပါတယ်။ ပထမအကျော့တွေဆုံခဲ့စဉ်က အာဆင်နယ် အသင်းဟာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အိမ်ကွင်းအိုးထရက်ဖိုဒ်မှာ (ဝ-၁)နဲ့ အနိုင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။ ဒီရလဒ်ဟာ ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ကတော့ ၂၀၀၆ ခုနှစ် စက်တင်ဘာလနောက်ပိုင်း အာဆင်နယ်ကို ပရီးမီးယားလိဂ်အိမ်ကွင်းပွဲစဉ်မှာ ပထမဆုံးအကြိမ် ရှုံးနိမ့်မှုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖာဂူဆန်နဲ့ အာဆင်ဝင်းဂါးတို့ နည်းပြခဲ့ချိန်မှာ ဒီနှစ်သင်းတွေဆုံတိုင်း တစ်ကမ္ဘာလုံးက ဘောလုံးပရိသတ်တွေ စိတ်ဝင်တစားရှိခဲ့ကြတဲ့ပွဲဟာ သူတို့နှစ်ဦး အသင်းတွေကနေ နှုတ်ထွက်ခဲ့ချိန်မှာတော့ ပြိုင်ဆိုင်မှုဟာ အသက်မဲ့ခဲ့သလိုဖြစ်ခဲ့ပါတယ်။ အခုအချိန်မှာတော့ ဆိုလ်းရှားရဲ့ ယူနိုက်တက်ဟာ ဇယားထိပ်ပိုင်းမှာရပ်တည်လာနိုင်တဲ့အထိ စွမ်းဆောင်ရည်တွေရှိလာခဲ့သလို အာတီတာရဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းဟာလည်း နိုင်ပွဲတွေရရှိလာနေပါတယ်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတွေ့ဆုံမှာက အာဆင်နယ်အသင်းအတွက်က သူတို့ရဲ့အိမ်ကွင်း (အမ်းမရစ်)၊
ပြိုင်ဘက်က ဒီရာသီမှာ အဝေးကွင်းစွမ်းဆောင်ရည်အားသာတဲ့ ယူနိုက်တက်၊ ဒီပွဲရလဒ်ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲ…?
ယူနိုက်တက် – ရှက်ဖီး ပွဲမှာ ခန့်မှန်းမှုပြောင်းပြန်ဖြစ်ခဲ့တဲ့ မိုက်ကယ်အိုဝင်ကတော့ ယခုပွဲစဉ်မှာလည်း ယူနိုက်တက်က ( ၂ -၁ ) ရလာဒ်နဲ့ အာဆင်နယ်အသင်းကို အနိုင်ရရှိမယ်လို့ ခန့်မှန်းထားပါတယ်။ အိုဝင်က BetVictor မှာ “အာဆင်နယ်အသင်းက ရာသီအစမှာ ရလာဒ်ဆိုးရွားခဲ့ပေမယ့် နှစ်သစ်မကူးခင် ပုံစံကောင်း ပြန်လည်ရရှိလာပါတယ်။ ယူနိုက်တက်ကလည်း ပြီးခဲ့တဲ့ ရှက်ဖီးနဲ့ ပွဲစဉ်မတိုင်ခင်ထိ အမှားအယွင်းမရှိကစားနိုင်ခဲ့တဲ့အသင်းတစ်သင်းဖြစ်ပြီး ဒီရာသီမှာ ယူနိုက်တက်ရဲ့ အဝေးကွင်း ခြေစွမ်းက ပိုပြီး ကောင်းမွန်ပါတယ်။”
“လီဗာပူးနဲ့ ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲစဉ်တွေက နည်းစနစ်ကို ပြန်လည် အသုံးချမယ်ဆိုရင် ယခုပွဲစဉ်မှာလည်း ရလာဒ်ကောင်းတစ်ခု ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ မားကတ်ရက်ဖို့ဒ်အနေနဲ့ လီဗာပူးအသင်းကို အနိုင်ရရှိခဲ့တဲ့ အက်ဖ်အေဖလားပွဲစဉ်က ခြေစွမ်းကို ဆက်ထိန်းထားနိုင်မယ်ဆိုရင် ဒီပွဲစဉ်မှာလည်း သွင်းဂိုးရယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ် ။” ဟု ပြောကြားသွားခဲ့ပါတယ်။